Enweghị ọtụtụ mba n'ụwa Practice Amalite na Turkey! | RayHaber
[08 / 12 / 2019] Ọnọdụ kacha ọhụrụ na Ankara Sivas High Speed ​​Train Line	06 Ankara
[08 / 12 / 2019] Ọzọ 27 Bus na Şanlıurfa Ọdụ Transportgbọ njem Ọha	63 Sanliurfa
[08 / 12 / 2019] Onye Isi Obodo Eskişehir Nwanyị Parkomat Ga	26 Eskisehir
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraEnweghị ọtụtụ mba n'ụwa Practice Amalite na Turkey!
06 / 11 / 2019 06 Ankara, Central Anatolia Region, General, Ụgbọelu, Ụzọ Awara Awara, Turkey
ngwa na-abụghị ụwa na ọtụtụ mba na-na-amalite turkiyede
ngwa na-adịghị ọtụtụ mba na ụwa amalite Turkey! Na mgbakwunye na ndị njem na-anaghị enwecha nsogbu na ọdụ ụgbọ elu anyị; A ga-eburu ụmụ ọhụrụ, ndị dị ime na ndị ọrịa na-arịa ọrịa chọrọ ngwa ngwa ụgbọ elu ọsọ!
General Directorate of State ọdụ ụgbọ elu (DHMİ) na Onye isi oche nke Board of Directors Hüseyin Keskin keere òkè na akaụntụ Twitter ya dị ka ndị a:
ngwa na-adịghị ọtụtụ mba na ụwa amalite Turkey!
Na mgbakwunye na ndị njem na-anaghị enwecha nsogbu na ọdụ ụgbọ elu anyị; A ga-eburu ụmụ ọhụrụ, ndị dị ime na ndị ọrịa na-arịa ọrịa chọrọ ngwa ngwa ụgbọ elu ọsọ!
Dị ka amaara, ndị nwere nkwarụ na ndị nwere ike imegharị ahụ: ụzọ okporo ụzọ, oche ndị na-eche nche, ebe ndị nwere nkwarụ, paspọtụ paspọtụ, ebe a na-adọba ụgbọala, oche ọlụsị, igwe anaghị akwụ ụgwọ na ihe ndị yiri ya.
Asambodo Ọdụ na-adịghị Agagharị na ọdụ ụgbọ elu 38 na Asambodo nnweta na ọdụ ụgbọ elu 18.
Ọrụ na-aga n'ihu na ọnọdụ nke a na ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ.
Ọtụtụ di na nwunye na-arụ ọrụ na urelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Transportgbọ njem…
Achọ n'aka ọtụtụ ụlọ ọrụ na Samsun Logistics Center
Bibicik 6 K Smart Stops Na-esetịpụ Ihe Nlereanya maka Ọtụtụ Obodo
Minista Arslan: "Ọtụtụ ihe banyere oge mmiri…
Çiğli Tram na ọtụtụ ndị ọzọ na-enyocha nnwapụta nke Ankara
Kachasinu Ịchịkọta robots na Turkey na October 1 ...
SAF-Holland na-etinye maka mmepụta ke Turkey
Turkey mbụ Okporo ígwè Welders bụ Sertifikalanıy ...
Turkey Mbụ Metro Exports na June N'ikpeazụ ụzọ kwụsịrị
China-echebe Mmadụ na Road Project agụnye Turkey si ...
Nsona Asambodo YOLDER nyere nkwado aka oru…
Prime Minister Yıldırım: Taa, Turkey bụ na ụgbọelu ...
Zapatero: irse Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhọrọ isi obodo na ụwa…
Akwụkwọ eji agba ụgbọ elu na-enweghị ihe ngosi
njem njem na-arịa ọrịa
Ọmụmụ ihe omimi banyere okporo ụzọ na Alanya